फेवाताल वरिपरि मापदण्ड विपरित बनेका संरचना हटाउन पोखरा महानगरलाई बाटो खुल्यो
पोखरा– फेवातालको मादण्ड विपरित बनाइएका संरचना हटाउन पोखरा महानगरलाई बाटो खुलेको छ । यसअघि, गएको ९ जेठमा महानगरले सूचना निकालेर १५ दिन भित्रमा मापदण्ड विपरीत बनेका संरचना हटाउने बताएको थियो । तर, उच्च अदालत पोखराले महानगरको नाममा तत्काल संरचना नभत्काउन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सो काम रोकिएको थियो ।
सूचना प्रकाशित भएको केही दिनपछि स्थानीय बिष्णु दाहालसहित २२ जनाले महानगरलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेका थिए । न्यायाधिश डालकुमार खड्काको एकल इजलाशले तत्काल संरचना नभत्काउनु भन्दै महानगरको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
शुक्रबार उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निवेदक र विपक्षी दुवैलाई २८ जेठमा बहसको लागि डाकेको थियो । मंगलबार, बहसमाथि फैसला सुनाउँदै न्यायाधिशद्वय यज्ञप्रसाद बस्याल र विनोदप्रसाद शर्माले यसअघिको अन्तरिम निष्क््िरmय हुने निर्णय सुनाएको हो ।
बहसले मापदण्ड विपरित बनेका संरचना हटाउन महानगरलाई सबै कानुनी बाटो खुलाएको छ । बहसमा निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताद्वय कृष्णप्रसाद तिमिल्सिना र कपिलमणि दाहाल विपक्षी पोखरा महानगर र जिल्ला समन्वय समिति कास्कीको तर्फबाट अधिवक्ताद्वय कमलप्रसाद अर्याल र भगवती पहारीले बहस गरेका थिए । सर्वोच्चले गएको वर्ष वैशाख १६ गते नै फेवातालको मापदण्ड कायम गर्न नेपाल सरकारलाई आदेश दिई सकेको छ ।
कर विवाद – सर्वोच्च अदालतबाट एनसेलकै पक्षमा फैसला अब के होला ?
नागरिकताबारे गृहको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्चको आदेश
तीन महिना भित्र एनसेलसँग लाभकर असुल गर्न सर्वोच्चको आदेश
निर्मला हत्या प्रकरण : पूर्व एसपी बिष्टसँग १० लाख धरौटी माग
जनकपुर बम काण्ड : यी हुन् जन्मकैदको सजाय पाएका ७ दोषी २०७५ चैत
प्रधानमन्त्रीको नयाँ निवासः डाक्टर कक्ष, डेन्टल कक्ष, सैलुनदेखि होम थिएटरसम्म!
खुलामञ्चका अवैध संरचनामाथि चल्यो डोजर
विप्लवका नेता ओली पक्राउबारे सर्वाेच्चले माग्यो सरकारसँग लिखित जवाफ